Amayeza emveli amaTshayina, i-Herbal Extract, iziqhamo kunye neentyatyambo iti-HEX
I-HEBEI HEX IMP. & EXP. I-COMPANY yinkampani egxile ekuthumeleni ngaphandle imifuno eluhlaza, imifuno eqhubekileyo yokuqala, izicatshulwa zezityalo, iti yeentyatyambo, iti yemifuno, izicatshulwa zezilwanyana, izongezo zempilo yendalo. Unyango lwendalo lwendalo lusetyenzisiwe njengokhathalelo lwempilo oluqhelekileyo kwihlabathi liphela kangangeenkulungwane. Ezi zityalo zivela emithini, iintyatyambo kunye nezityalo ezifumaneka endle kwaye zilinyelwe iipropathi zazo zokuphilisa iminyaka emininzi.
ICAMPANI likhathalela kakhulu ekukhetheni amayeza kunye nemveliso yamayeza. Ikwanaso nesiseko sayo sokutyala esingangcolisi moya kunye nomenzi ekuqhubeni amayeza emveli amaTshayina (TCM) .HEX ikhetha abavelisi ngononophelo kwaye ibeka esweni iinkqubo zolawulo lomgangatho kwiimveliso zethu.
Ixhasa impilo yenkqubo yokuphefumla, amajoni omzimba, inkqubo yemithambo-luvo, iisono, isisu kunye namathumbu kunye nokuba sempilweni jikelele komzimba.
Ixhasa impilo yamajoni omzimba kunye neenkqubo zesisu. Inceda ukunciphisa ukuzala kwesisu. Izithako zePatchouli, amagqabi kaPerilla, iAngelica dahurica, iAtractylode macrocephala (isosiweyo), i-Tangerine peel, i-Pinellia (eyenziwe), iMagnolia (eyenziwe ngejinja), iPoria, iPlatycodon, licorice, imbiza esisu, ijujube, ijinja. Izixhobo: Akukho zimpawu Le mveliso yipilisi emnyama emxinwa; ivumba elimnandi, liswiti kwaye liyakrakra kancinci. Amanyathelo okhuseleko 1. Ukutya kufuneka kube lula. 2. Ayingomcebisi ...
Amayeza emveli patent yaseTshayina ziipilisi, umgubo, ulungiselelo lwecapsule, ulwelo lomlomo kunye namalungiselelo emveli amayeza amaTshayina enziwe ngamaqhekeza amaTshayina. Zingasetyenziselwa ukunyanga izifo, ukuthintela izifo kunye nokukhuthaza impilo.
Isicatshulwa seCranberry: Isicatshulwa seCranberry siqulethe i-flavonoids yendalo kunye neProcyanidins, enokubuyisa amandla eCollagen, yenze ulusu lube mpuluswa kwaye luthambe, lilanga lendalo, linokuthintela ukonakala kwe-UV kulusu, umsebenzi obalaseleyo we-antioxidant, anti-ukuguga, ukukhusela impilo yentliziyo, kodwa kunye nokuthintela okukuko kunye nokunyanga okunyanga kosulelo lwabantu abadala ababhinqileyo
Isicatshulwa seDiosgenin: Ibizwa ngokuba "yigolide yonyango" kwicandelo lezonyango. I-Diosgenin yinto ebalulekileyo ekrwada yokuvelisa iihomoni ze-steroid. Iihomoni ze-Steroid zinamandla okulwa nosulelo, anti-allergies, anti-virus kunye ne-anti-shock anti-effects, lunyango lwe-rheumatism, i-cardiovascular, i-lymphoblastic leukemia, i-encephalitis yeselula, izifo zesikhumba, i-anti-tumor kunye nezigulane ezibalulekileyo zokusetyenziswa okubalulekileyo iziyobisi; Yinto eluhlaza yokukhulelwa uKetenolo ...
IStevioside (CNS: 19.008; INS: 960), ekwabizwa ngokuba yiStevioside, yiglycoside ekhutshwe kumagqabi kaStevia Rebaudia (Stevia), usapho lwezityalo kusapho oludibeneyo. I-stevia iswekile ye-calorific value yi-1/300 ye-sucrose, engafakwanga emva kokutya komzimba womntu, ayivelisi ubushushu, ilungele abantu abaneswekile kunye nezigulana ezityebe kakhulu. Xa uStevia exutywe ne-sucrose fructose okanye iswekile eyenziwe ngomzimba, ubumnandi bayo kunye nencasa yazo zinokuphuculwa. Ingasetyenziselwa iilekese, iikeyiki, iziselo, ii ...